Nhau - HMB 2020 Chikwata Buliding Chiitiko
Yantai Jiwei 2020 (Zhizha) "Kubatana, Kutaurirana, Kubatana" Tema Buliding Chiitiko
Pa 11 Chikunguru, 2020, HMB yekubatanidza fekitori yakaronga Team Buliding Chiitiko, Iyo haigone chete kuzorora uye kubatanidza timu yedu, asi zvakare bvumidza mumwe nemumwe wedu kuti anzwisise zviri nani mamiriro ezvinhu echikwata chakabudirira. Kunyangwe zviitiko zvacho zviri zvenguva pfupi, zvinotiunzira kufunga kwakanyanya, kunyanya Maitiro ekubatanidza zvatakadzidza mumutambo kuti ushande mubvunzo watinofanira kufunga nezvazvo.
Chiitiko ichi chinotenderera pamusoro wenyaya we "Kubatana, Kutaurirana, uye Kubatana", iyo inotarisira kusimudzira kubatana kweboka revashandi pamwe necentripetal simba rose. Ichi chiitiko chinobatsira HMB yekubatanidza timu kusimbisa kutaurirana nekubatana pakati pevashandi vese veHMB Chiitiko ichi chinosanganisira kuona kushanya uye Counter-Strike mutambo.
Munguva yekushanya, takashanyira yakakurumbira nzvimbo yekushanya muYantai inonzi "WURAN" tembere. Vese vashandi veHMB vakanakidzwa nemakomo akanaka uye kuona kwemvura, uye vakatora zororo remuviri nepfungwa mune rakabatikana basa uye hupenyu, hwaifadza zvakanyanya.
Kana tichitamba mutambo weCounter-Strike, munhu wese akaita zvakanaka, nhengo dzechikwata dzakabatana pamwe chete, dzakatora nzira dzakachinjika, dzichibatsirana, uye nekuvandudza kugona kweuto rese. Kuburikidza nemutambo uyu, Kuburikidza nemutambo uyu, tinogona kuona kuti nguva zhinji hazvina kukwana kuvimba chete nesimba redu pachedu. Kushanda pamwe chikamu chakakosha cheboka. Kugona kwevashandi vazhinji kwakapihwa kunatsiridza kugona kwavo kukurira matambudziko.Pamusoro pebasa, tinofanira kuita basa remumwe nemumwe wedu. Chatinoda kubatana, uye tese tinoziva kuti, "Kubatana, Kutaurirana, Kubatana" kunogona kutibatsira kuita zvese nemazvo.
Basa rekuvaka timu rakarongwa nekambani iyi hukama hwakanaka kwazvo pakati pebasa nekuzorora. Iko kuzorora kwemuviri nepfungwa kunogona kutendera nhengo dzechikwata kuti dziunganidzezve simba ravo uye vazvipire pachavo kune ramangwana basa. Yantai Jiwei Kuvaka Mashini Zvishandiso Co., Ltd.chokwadi hombe mudiwa. mhuri.